Guam • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Guam dia faritany voalamina any Etazonia any Micronesia any amin'ny faritra andrefan'ny Oseana Pasifika. Io no teboka farany ambany sy faritanin'i Etazonia, miaraka amin'ny Nosy Mariana Avaratra. Ny tanànan'ny Guam dia Hagåtña ary Dededo no tanàna be mponina indrindra. Mpikambana ao amin'ny Community Pacific i Guam hatramin'ny 1983. Ny mponina ao Guam dia antsoina hoe Guamanians, ary olom-pirenena amerikana izy ireo hatramin'ny nahaterahany. Ny vazamanianina teratany dia ny Chamorros, izay mpihavana amin'ireo teratany Austronesiana hafa any Atsinanana Indonezia, Filipina ary Taiwan.
LANGUAGE Chamorro, Anglisy